Rockery do-it-yourself: nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka - Ntughari Udo - 2020
Ọ bụghị onye ọ bụla na-anọ n'oge okpomọkụ na-amasị tinker na ubi ma ọ bụ ogige. E nwere ndị nwere ebe ndị dịpụrụ adịpụ, ọtụtụ ndị na-enwekwa mmasị iji oge ha n'efu n'apụta nke okike, ọ bụghị ịzụlite ya, ma na-enwe mmasị na ịma mma dịnụ. Enwere ike ịgwa ha ka ha hazie rockeries, nke a pụkwara ime site na aka ha, ma ọ bụ obodo ha. Otú ọ dị, anyị ga-aghọta na a dịghị eji ihe osise eji atụgharị nkume, ọ ghaghị iburu ebe kwesịrị ekwesị ma rụọ ọrụ ya na nhazi ihuenyo.
Ịhọrọ ebe ị ga-ede
Nhọrọ nke nkume
Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ nke okike
Ogige na-elekọta ubi
Difference nke nkume aria si ugwu Alpine
Nkume Rock, dị ka alpine slide, bụ ihe e kere eke site na nkume na osisi, ma a ka nwere ọdịiche n'etiti ha. ọtụtụ esemokwu:
Nchegbu nke aria na-achọghị elu ma ọ bụ mkpọda dị mkpa; a pụkwara ịkwadebe ya na ebe dị nwayọọ.
Ugbo ogige nwere osisi na-enwu ọkụ, ebe ọ bụ na a pụrụ ikpuchi rockeries.
Ugwu Alpine chọrọ nnukwu nkume ịkwado na ịkwado ogologo oge n'elu ugwu, rockeries nwere ike ịbụ ụdị dịgasị iche iche, ruo na gravel ọma.
Ekwu okwu nke ogige ugbo - osisi nke e ji nkume mee, ya na nkume akuku, kama nkea - osisi ndia na-emesi ike ha mma.
Enwere ike ịnweta conifers nke dị ntakịrị na nhazi nke oké nkume, a naghị ewepụ ha iji na-akụ n'ugbo.
Maka ndebanye akwụkwọ rockery jiri osisi dịgasị iche, ma ọ bụghị naanị alpine.
Mgbe ị na-eme atụmatụ iji aka gị mee rockeries, ị ga-ebu ụzọ kpebie ụdị nhazi nke kachasị mma na otu ikpe. Ị nwere ike ịmepụta ya dabere na iwu nke otu n'ime ụdị: English, European or Japanese. Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ọ na-eme nhọrọ nke osisi, na-arụzi nkume.
Ihe dị iche iche nke ịsụ Bekee bụ osisi ahụ, họrọ na agba uche, egwu na variegation nke agba na-ekweghị. Osisi na coniferous osisi kacha mma maka ya. Ndị na-eto eto na ndị na-adị ndụ mgbe niile na-eme ka ị nwee ike ịchọta ebe ọdịda anyanwụ dị mma nke nwere ike ịdịgide ruo ọtụtụ afọ na ọbụna ọtụtụ iri afọ, na-atọ ụtọ anya na greenery.
A na-eji osisi arụsị nke Europe kọwaa osisi na-eto eto n'etiti etiti. Ndị a bụ osisi nkịtị: okooko osisi, osisi na conifers. Maka imewe ya chọrọ mgbalị kachasị - iji ogbe ime obodo na ahịhịa, nke kwekọrọ n'ọnọdụ ihu igwe na ala.
A na-achịkwa ụdị Japanese akuku nkume na-eji ngwa ngwa osisi. A na-enye mmasị maka ebe kwesịrị ekwesị nke ihe okike dị iche iche dị iche iche na nha. A na-akwanyere ubi nkume Japanese dị iche iche n'ụwa nile, nke a bụ echiche nkà mmụta sayensị nke nwere ndị Fans ọ bụghị nanị n'etiti ndị Japan.
Ndị chọrọ ịhazi ihe dị otú ahụ kwesịrị ịmụ ihe ọmụma ahụ ma ghọta ihe rockeries, ụdị ụdị a ga-ahọrọ, ebe ị ga-edebe ya, ihe ndị ị ga-ahọrọ maka usoro ntanetị a.
Chọpụta ụzọ aghụghọ nile nke ịmepụta na saịtị nke akwa akwa ifuru - mixborder.
Mgbe ị kpebisiri ike na ị ga-ahọrọ, ị ga-ahọrọ ebe kwesịrị ekwesị na-eme ihe niile chọrọ na ọnọdụ.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịmụ saịtị: ogo ya, ọdịdị ọdịdị dị na ya na topography. Dịka ọmụmaatụ, na obere mpaghara, nnukwu ụlọ nkume ndị dị ịtụnanya ga-ele anya na ọ dịghị ekwekọ. N'aka nke ọzọ, obere oasis dị mma nwere ike ịfọnarị ngwa ngwa n'ọtụtụ sara mbara nke nnukwu ibé ma ọ bụ n'okpuru ndò nke ịkọ osisi.
N'ime atụmatụ ndị dị n'akụkụ ala, ọ ka mma ịnye ohere maka ravines, terraces na ndị ọzọ dị iche iche. Ị nwere ike iti ha ihe n'echiche dị ukwuu, mee ka ọ ghọọ akụkụ dị mma nke ọdịdị.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụlọ ahụ, ọ ga-abụ na ọ gaghị achọta gully, ọdọ mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri na ya, ebe ndị dị otú ahụ na-anọchi anya elu ala. N'okwu a, enwela iwe - rockeries dị mma n'ihi na ọ dị oke mma na mpaghara ọ bụla. Ọ dị mkpa iburu n'uche ebe ìhè nke mpaghara ahọrọ, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, na-ahọrọ anyanwụ n'ihi na nhọrọ nke osisi dị oke oke na mpaghara ebe.
Ọ dị mkpa! A ga-ahọrọ ebe ahụ ka e wee hụ ihe ndị ahụ na-ahụ maka ọdịdị ahụ, ma nwee obi ụtọ n'ile anya ha, ọ bụghịkwa na-efu na azụ.
Maka ịmalite, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmalite site na obere mpaghara, na-emegharị nkà ọhụrụ nke onye na-emepụta ihe ntanetị, ebe ọ bụ na nnukwu ebe anaghị adị ọnụ maka ndị na-abụghị ndị ọkachamara. Tụkwasị na nke a, ilekọta obere ogige dị mfe karịa nnukwu aquarium.
Ọ ka mma iji zere ịtụ egwu nkume dị nso ụlọ ma ọ bụ ụlọ mkpọrọ, ma ọ bụrụ na a pụghị izere nke a, ọ ka mma ịjụ ha na-arị elu.
Ị ma? E kwesiri icheta na mmadu psyche na-acho ihe ndi ozo dika ihe na-adighi nma. N'aka nke oz o, ihe nd i ah u yiri ot 'u ah u na-ebelata. Ndị na-emepụta ihe, gụnyere ihe ndị dị n'ime ala, nwere ọtụtụ usoro maka ịmepụta ọnọdụ a chọrọ.
Na-ejuputa rockeries, ị kwesịrị ịmalite na nkume. Ha na-etolite echiche ihe. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ "yiri", na-ese n'otu agba ma na-agụnye otu ihe: granite, sandstone, quartzite, na ihe ndị ọzọ. Ihe ndi ozo kwesiri ka odi nma.
Ị ma? Ọ na-achọsi ike izere akụkụ ndị dị nkọ na ibe na nkume, ha na-akpata nchekasị na nchekasị.
Ikwesighi ịhọrọ otu okwute ndị dị na nha na udidi, nke mere na rockeries adịghị dịka ụyọkọ nke ihe owuwu. Nkume ọ bụla nwere ebe nke ya na ọrụ nlekọta, ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ nwere ihe dị iche iche dị iche iche ma dị iche na nha na ọdịdị ya site na ndị agbata obi ya, na-enwe, ma ọ bụrụ na ha na ha. Dika nkume buru ibu ndi agwakota dika ihe ndi ozo ga adi nma karia umuaka. Ọ ka mma ịnọ na sandstone, limestone ma ọ bụ granite iberibe.
Ụfọdụ ndụmọdụ bara uru:
okpukpu kwesiri ibu nkume ukwu abuo abuo, nke buru ibu ga eme ka obi di ya nma;
ọ na-adị mfe na-acha akwụkwọ ndụ ntụpọ n'etiti akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ; ọ ka mma iji nkume nke ọtụtụ shades;
a na-atụle ntọala n'okpuru nnukwu ụdị dị iche iche ka a rụzie ya iji gbochie ha ịbanye n'ime ala;
enwere echiche megidere nkume nke ebe dị iche iche: ụfọdụ ndị na-emepụta iwu na-akwado iji otu ụdị nkume ahụ, ndị ọzọ - ịmepụta njikọta dị iche iche na-enweghị atụ egwu ijikọ ọnụ, dịka ọmụmaatụ, nkume granite na chara chara. N'ezie, eziokwu ahụ dị n'etiti, ọ pụkwara ịdị na-ejikarị ụda dịgasị iche iche eme ihe site na uto nke onye mmebe na ihe ndị ọ chọrọ.
Anyị na-akwado gị ka ị mara onwe gị na usoro dị otú ahụ na nhazi ihu ala dị ka mmiri mmiri.
N'ịbụ ndị kpebiri na nkume, oge eruola ịkwaga na ịhọrọ akụrụngwa osisi nke edemede. Ndị na-emekarị ka ndị nnọchianya nke osisi ahụ, ndị ekewapụrụ onwe ha n'ụzọ anọ:
Conifer. Ọtụtụ osisi dwarf. Dịka ọmụmaatụ, thuja, juniper, spruce na pine.
Osisi. Ọtụtụ na-agbacha agba ma kọmpat. Dịka ọmụmaatụ, ọkpụkpọ anụ, mmanụ aṅụ na mmanụ aṅụ ma ọ bụ nke nwere ike.
Osisi okooko osisi. Dịka ọmụmaatụ, ngwakọta nke herbaceous (geranium, primrose) na bulbous (narcissus, tulip, crocus, hyacinth).
Ihe mkpuchi ala. Dịka ọmụmaatụ, ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ phlox.
Ọ dị mkpa! Nkpuru ahihia enweghi ike ibu ihe na agbapu, isi ihe nke rockeries bu nma nke nkume, ndi nnochite anya nke ohia na emesi ya ike.
Nke mbụ, ị kwesịrị ilekọta ahịhịa ndụ mgbe niile, karịsịa nke a dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ụdị Bekee.
na-eto eto buru ibu;
eto nwayọọ nwayọọ;
dị mma iji dozie ya.
Ndị na-emepụta na-ahọrọ:
obere osisi cypress;
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ banyere ma shrub ga-agbanye mgbọrọgwụ, ị nwere ike iji nhọrọ na osisi n'ime osisi. Rhododendrons - ihe ndị a na-ejikarị eme ihe na ha, karịsịa Japanese, ebe ha na-emesi ịdị na-esote ọnụ.
Ị ma? N'ụzọ na-adọrọ mmasị, na usoro nke rockeries ọ ga-ekwe omume ịmepụta ngwongwo nke na-agụnye osisi ndị a na-adịghị ahụkebe na ọnọdụ okike.
Mgbe osisi na osisi kpebisiri ike ịnọ ebe obibi, oge eruola ịmalite iburu okooko osisi. Ọ dị mkpa iji hụ na utịp na-aga n'ihu: ụfọdụ oge ntoju, ndị ọzọ oge ntoju. Okooko osisi maka rockeries jiri ụdị dịgasị iche iche, dabere na echiche na ọnọdụ gburugburu ebe obibi, aha na foto ha nwere ike ịchọta ngwa ngwa na ihe ndị dị na ha na akwụkwọ ndị pụrụ iche.
tulips dị mkpụmkpụ;
violet bụ ọhịa.
Mgbe ị na-akụ, ị ghaghị ịgbaso usoro: osisi nke nwere usoro mgbọrọgwụ nke ọma, nke a kụrụ na mbụ, dịka ọmụmaatụ, lily ma ọ bụ Siberia irises. Mgbe ahụ, ha na-akụ ha na ihe mkpuchi ala: mosses, sedums, phloxes, saxifrage na ndị ọzọ. Na mgbakwunye na ihe mara mma, ha na-arụ ọrụ dị irè iji wusi ala ala elu elu, na-egbochi nkwụsị nke mkpọda na oge opupu ihe ubi.
N'ebe enweghị mgbada na rockeries, a na-atụ aro ka ị nweta ọrụ nke osisi na-ekpo ọkụ na mmiri: primrose, astilbe.
N'ebe dị iche iche, eji ọka na-ewu ewu, na-enye ha ụfọdụ enweghị nchekasị.
N'ịbụ onye jidere nkume, osisi na seedlings, ị nwere ike ịmalite iji ụlọ aka rụọ ụlọ, n'okpuru bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ.
N'oge a, a na-ahọrọ saịtị na ụdị ahụ, nke ga-edozi nkume ahụ. Ọ bụ oge iji mejuputa otu ọrụ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iche echiche, na ka mma, iji dozie ndokwa nke atụmatụ niile: nkume na ahịhịa site na akara.
Na ubi gị abụghị naanị mma, kama ọ dịkwa mma, wuo ya arbor, pergola ma ọ bụ naanị bench, ma jiri akwụkwọ ndị e ji aka mee.
edozi - echere maka otutu afọ, ma enwere ihe ize ndụ na ha ga-agwụ ike;
na - agbanwe agbanwe - mgbe niile na-achagharị achagharị gburugburu otu ìgwè nke perennials, e nwere ma ihe dị iche iche na agbanwe agbanwe;
nwa oge - foto ndị dị egwu n'etiti osisi a kụrụ, ka ha na-etolite, a na-agbanwe ma ọ bụ na-ewepụ ya.
Ga-atụle nzọụkwụ site nzọụkwụesi mee rockeries. Nke mbụ, ọ bara uru iji nweta ndidi, ebe ọ bụ na okwu a anaghị anabata ngwa ngwa, na mmejọ ndị mere n'ihi ngwa ngwa na-abata ntaramahụhụ.
Ọ ga - amalite na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ, ọ bụrụ na ejighị ya - na oge opupu ihe ubi.
Weta n'ala ala nke ugbochi ndi ozo.
Wepu ya site na centimita 20 ma wepu akwa akwa sod n'elu ahihia ahihia.
Mpaghara na-ekpuchi ya na ákwà na-abụghị nke.
Debe akwa nke drainage: brik agbaji, nkume a na-agbaji agba, pebbles, ma jiri ya tụnyere ájá, oyi akwa kwesịrị igosi ịdị elu nke 20 centimeters ahụ.
Ọ bụrụ na ị naghị elekọta drainage drainage, osisi ndị na-adịghị amasị mmiri na-adọrọ adọrọ nwere ike emetụta nnọọ.
Hapụ nanị ibé naanị maka ọnwa 2 iji kwụsị. Mgbe oge a kapịrị ọnụ, ị nwere ike ịga n'ihu ọrụ.
Debe nnukwu okwute n'elu ájá, nke di ugbua adi njikere ma were njikere iburu ha.
Ọ dị mkpa! Ndị mbụ na-achọ ime ihe dị mma, ha nwere ike iji nkume tụgbuo ya. E kwesiri icheta na nha, odidi, agba, udidi nke nkume obula, guzo n'ebe ozo, nwere ihe nke onwe ya ma na-ekere òkè nke ya.
Ebe fọdụrụ ka jupụtara na mkpụrụ nke osisi ga-akụ. O kwesịghị ịba ụba, ma isi ihe dị n'oké nkume bụ nkume, okooko osisi ekwesịghịkwa ikpuchi ha. Otú ọ dị, mkpụrụ ahụ kwesịrị ịdị mma nke mmiri na ikuku.
N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa iji nyocha ma dezie nkwụsi ike nke nkume ahụ, ọ bụrụ na ha na-emegharị, ọ dị mkpa iji ala, ahịhịa ma ọ bụ ọbụna soda chụrụ ya.
Ighacha mkpụrụ na mmiri, ị ga-achọ ijide n'aka na anaghị asacha ya, ma ọ bụghị na ị ga-agbanye ya. Ọ ghaghị ibu mmiri ma nọrọ n'otu ebe ahụ.
Mgbe oge ọ dị mkpa maka ịdabere na ya, ọ ga-ekwe omume ịmalite ịkụ osisi, dabere na echiche na atụmatụ ndị mbụ.
Mkpụrụ mbụ kụrụ conifers, na-eme ka ha dịkwuo n'ime ala site na gburugburu gburugburu. Na-esote ha bụ osisi, mgbe ahụ, okooko osisi. Mgbe ị gwụsịrị nke a, a ghaghị fesa ihe nkiri ahụ na ụwa.
N'ikpeazụ, a na-eji obere nkume na ịkwatu ihe mejupụtara ya.
Otutu nkume a kwesiri ka o yie ka osisi ndia di;
Ị ma? Ọ bụrụ na ị na-echeta "ngalaba ọla edo," ụkpụrụ nke dị n'ime anya mmadụ, ihe dị oke mma maka nghọta bụ ogo nke ịdị elu na obosara nke rockeries ga - adị 5: 8 maka ihe dị elu na 3: 8 maka ndị dị ala.
Ugbu a na mmalite oge opupu ihe ubi, rockeries kwesịrị ịṅa ntị na:
wepu akpo akpo;
prune mgbọrọgwụ nke ala na-ekpuchi ndị toro n'ogo na-ezighi ezi;
nyochaa nchekwa nke osisi mgbe oge oyi gasịrị ma kụọ osisi ọhụrụ maka nkwụghachi maka ndị oyi kpọnwụrụ;
lelee ike nke omume nke nkume na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dozie ha;
kụrụ kwa afọ na mmalite May, ma kụọ osisi n'etiti;
echefula ya na ikpe a, na-echeta ọrụ kachasị mkpa nke nkume;
ahihia na igwo ala;
malite ịcha mgbe ala dries na omimi nke 7-8 centimeters;
onye kwesiri ka e nye ya nri, n'enweghi oke obi uto, n'ihi na osisi agaghi eto eto;
iji kpochapu mgbe nile: okooko osisi a na-amaghi ahihia, ebe a mịrị amị na ihe ndị yiri ya, nakwa ịkpụchasị ya;
na ihe gbasara ọrịa ma ọ bụ ọrịa, mee ihe kwesịrị ekwesị;
ebe nchekwa maka oyi nwere ike ịchekwa okooko osisi site na-egbuke egbuke, ma chebe nkume site na mmetọ.
Ọ dị mkpa! A ghaghị gwute bulbs nke osisi bulbous kwa afọ atọ ma kụọ ya, kụrụ azụ.
Dika enwere ike ighota ya site na nke a, ogagh adi ike ikwusi rockeries n'ala ha, onye obula nwere ike ime nke a ma oburu na ochicho di.
Ụdị nkuku dị otú ahụ ga-eweta ọṅụ mgbe nile, ma lekọta ya chọrọ obere. Dabere na ọnọdụ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe mmasị, ị nwere ike ịgbanwe ọdịdị ya, gbakwunye ihe ma ọ bụ wepụ ihe na-adịghị mkpa, na oge ọ nwere ike ịgbasa ma ọ bụrụ na odida obodo na-enye ohere na echiche, nke anaghị esiri ike ịgbanwe.
Na-eche dịka onye mmepụta ọdịdị mbara ala, na-ewu ma kwadebe akụkụ dị mma, nke ga-eweta ọṅụ, udo na obi ụtọ.